Muxuu ku soo dhamaaday kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe - Jowhar Somali news Leader
Home News Muxuu ku soo dhamaaday kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe
Muxuu ku soo dhamaaday kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo xalay kulan gaar ah ku yeeshay Madaxtooyada ayaa ka wada hadlay arrinta Gobolka Gedo ee sida weyn labada dhinac isugu hayaan.
Axmed Madoobe ayaa horay shuruud ku xiray in aanu miiska wada hadalka soo fariisan doonin, haddii aanay dowladdu ciidankeeda ka soo saarin Gobolka Gedo, isla markaana Jubbaland gacanteeda lagu soo celiyo maamulka Gobolka.
Ilo wareedyo ku dhow dhow kulankii xalay ee Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa sheegay in sidii hore ay isaga soo dhowaadeen, isla markaana uu jiro is faham hordhac ah oo suuragelin kara in horay loogu sii ambaqaado wada hadalada.
Wararka ayaa intaa ku daraya in labada dhinac isku fahmeen in xal ka gaarista arrinta Gobolka Gedo u saaraan Guddi min hal xubnood ah, kuwaasoo ka shaqeynaya farsamo ahaan sidii loo bilaabi lahaa jawi dib u heshiisiin oo dhinacyada Gedo la isugu keeni lahaa.
Madaxweyne Farmaajo, iyo Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa saaka oo Sabti ah leh kulan saddex geesood ah, kulankan oo ah mid quraac ah ayay kaga arrinsanayaan xal u helida arrimaha dhexdooda iyo sidii wada hadaladooda ay ugu soo biiri lahaayeen Saddexda Madaxweyne Dowlad Goboleed sida Hirshabeelle, Galmudug iyo Koofur Galbeed.